प्रत्यक्ष स्ट्रिमि Tre प्रचलन र तथ्याistics्क | Martech Zone
मंगलवार, अगस्त 1, 2017 Douglas Karr
यस वर्ष हाम्रो प्रोजेक्ट मध्ये एक निर्माण गर्नु हो प्रत्यक्ष प्रसारण हाम्रो मा डेस्क पोडकास्ट स्टुडियो। हामी वास्तवमा उही अडियो उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं भिडियो थप्दा। भिडियो उपकरण मूल्यमा तल आउँदै छ र सानो प्याकेजहरू सानो स्टुडियो प्रबन्धको लागि प्रत्यक्ष-भिडियो कम्पनीहरूले देखाउँदै छन्। हामी कम्तिमा cameras क्यामेरा र डेस्कटप वा कन्फरेन्सिंग सफ्टवेयरबाट कम एक तिहाई र भिडियो एकीकरण प्रबन्धनको लागि प्रणाली प्राप्त गर्ने आशामा छौं।
प्रारम्भिक अंगिकारमा उच्च लागत र चाँडो मिति सकिएको उपकरणको जोखिम हुन्छ, तर बजार शेयर अपोटेसनको फाइदा। म आशा गर्दछु कि हामी लामो समय सम्म प्रतीक्षा गर्दैनौं, तर विकसित भएको भव्य अद्भुत प्रविधिको फाइदा लिन पर्याप्त लामो। यदि तपाईं कहिले कसैलाई लाइभ स्ट्रिमिंग टेक्नोलोजी विशेषज्ञ अनलाइन पछ्याउन चाहानुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् जोएल कम। ऊ प्लेटफर्म र उपकरणमा सबै पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलो साझा गर्दछ।
त्यसोभए आज हामी कहाँ लाइभ स्ट्रिमि withको साथ छौ? यो बृद्धिमा विस्फोट भएको छ र धेरैले कल्पना गरेभन्दा बढि गोद लिन सकिन्छ। यस इन्फोग्राफिकको विकासको रूपमा मैदानमा त्यहाँ पाँच प्रमुख प्रत्यक्ष स्ट्रिमिंग प्लेयरहरू छन्, प्रत्येक बिभिन्न फाइदाहरूका साथ:
फेसबुक लाइभ - Million 360० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू हेर्छन् फेसबुक प्रत्यक्ष नियमित रूपमा ... तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि फेसबुकले प्रत्यक्ष भिडियोको धक्का दिन्छ, एक टन दृश्यहरू उत्पादन गर्दछ तर म सment्लग्नता तथ्या .्कहरूको बारेमा प्रश्न गर्छु। प्रत्यक्ष भिडियोहरू अन्य भिडियो सामग्रीहरू भन्दा तीन गुणा लामो हेरिन्छ र प्रत्यक्ष भिडियोमा पछि पुनः प्ले गर्ने क्षमताको साथ प्रतिक्रिया र छलफलको अनुमति दिन्छ। फेसबुकले यसमा प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि प्लट गर्दछ फेसबुक लाइभ नक्शा ताकि तपाईं लोकप्रिय र स्थानीय प्रत्यक्ष-स्ट्रिमहरू पाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभ अब मोबाइल, डेस्कटप, र पृष्ठहरूमा सम्भव छ।
इंस्टाग्राम प्रत्यक्ष कथाहरू - करिब २०० मिलियन नियमित प्रयोगकर्ताहरू हेर्नुहोस् इन्स्टाग्राम जीवित दर्शकहरू वास्तविक-समय मनपर्दो र टिप्पणीहरू मार्फत संलग्न हुन सक्छन्। प्रस्तुतकर्ताहरूले हेर्न सबै दर्शकहरूको लागि टिप्पणीहरू पिन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष कथाहरू अनुप्रयोगको शीर्ष भाग मार्फत उपलब्ध छन् र नयाँ कथाहरूको माध्यमबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ शीर्ष प्रत्यक्ष अन्वेषण ट्याबमा सेक्सन। इन्स्टाग्रामले स्नैपच्याटको प्रत्यक्ष स्ट्रिमि features सुविधाहरूको नक्कल गरे पछि growth२% ले तिनीहरूको स्लोपचेटबाट बाहिर निकाले।
यूट्यूब लाइभ - जबकि एक अरब भन्दा बढी मानिसहरूले यूट्यूबको प्रयोग गर्छन्, म विश्वास गर्दिन यूट्यूब लाइभ को रूपमा देखिएको छ सामाजिक यस बिन्दुमा प्रत्यक्ष प्रसारण गन्तव्य। प्रत्यक्ष स्ट्रिमि केवल प्रमाणित च्यानलहरूको लागि मात्र हो र एक वैकल्पिक मोबाइल प्रत्यक्ष स्ट्रिम मात्र उपलब्ध हुन्छ एकचोटि तपाईंसँग एक हजार ग्राहकहरू छन्। वास्तविक-समय टिप्पणीहरू उपलब्ध छन् र सुपर कुराकानीले दर्शकहरूलाई उनीहरूको प्रसारणको बखत उनीहरूका टिप्पणीहरू हाइलाइट गर्ने एक तरीका दिन्छ। यूट्यूब लाइभ घटनाहरू बहु क्यामेरा समर्थन गर्दछ र मार्केट गर्न को लागी तालिका मिलाउन सकिन्छ।
झटका - झटका गेमि market बजारले प्रभुत्व जमाउँछ जहाँ 9.7.। million मिलियन दैनिक प्रयोगकर्ताहरूले दैनिक रूपमा औसत स्ट्रिमहरू हेर्नको लागि १० minutes मिनेट खर्च गर्छन्। वास्तविक समय टिप्पणीहरू र कुराकानी विन्डोमा इमोटिकन्स उपलब्ध छन्। ट्विच प्रयोगकर्ताहरूले अन्य स्ट्रिमहरूलाई क्रस-प्रमोट गर्न सक्दछन् जब तपाईंको च्यानल अफलाइन होस्ट मोड प्रयोग गरेर गर्दछ। बिट इमोटिकन्स खरीद गर्न सक्षम छन् ताकि प्रशंसक स्ट्रिमरहरूलाई थप चन्दा दिन सक्दछन्।
live.ly - million मिलियन कुल प्रयोगकर्ताहरूले मासिक मा सामग्री हेर्नुहोस् live.ly।, musical.ly बाट एक मोबाइल अनुप्रयोग। औसत प्रयोगकर्ताहरूले अनुप्रयोगमा प्रति दिन तीन सत्रहरू, वा दिनको लगभग about.। मिनेट खर्च गर्दछ। सुविधाहरूले वास्तविक-समय टिप्पणीहरू र "इमोजी-प्रेमीहरू" समावेश गर्दछ। अतिथि अतिथि विकल्पले प्रत्यक्ष स्ट्रिमरहरूलाई प्रशंसकहरू ब्रोडकास्टमा पाहुनाहरू समावेश गर्न अनुमति दिन्छ। फ्यान-खरिद भर्चुअल उपहार र प्रतीकहरूले टिप्पणीहरूमा संलग्न गर्न सक्दछ र लामो पर्दामा रहन्छ।
Koeppel Direct बाट सम्पूर्ण इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्, प्रत्यक्ष स्ट्रीमि ofको उदय: वास्तविक समय सage्लग्नताको पुन: परिभाषा गर्दै.
टैग: फेसबुक लाइभइन्स्टाग्राम प्रत्यक्षलाइभ स्ट्रिमिङप्रत्यक्ष स्ट्रिमि engage संलग्नताप्रत्यक्ष स्ट्रिमि statistics तथ्या .्कlive.lyसक्रियmusical.lyघाइतेyoutube प्रत्यक्ष